TRUESTORY: NLD ပါတီ ၏ ဘင်္ဂါလီင်္ အရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ အား ..... ပါတီဥက္ကဌ မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြား
NLD ပါတီ ၏ ဘင်္ဂါလီင်္ အရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ အား ..... ပါတီဥက္ကဌ မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြား
ပဋိပက္ခက . မနေ့က တစ်နေ့
ကမှ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး
မြစ်ဖျား ခံတာက နည်းနည်း
ကြာပါပြီ .. အဓိက က
ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး ပြဿ
နာက ဖြေရှင်းနည်း ပါ
နည်းကို ရှာရမယ် .
နည်း ပဲ ..... ဒီခေတ်မှာ ကိုယ်သီးသန့်နေလို့ ရတဲ့ ခေတ် မဟုတ်ပါဘူး”
( ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ၃၁.၁.၂၀၁၃ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့ . အပေးအယူ ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ ဘင်္ဂါလီ တွေက တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တက်လာတယ် ... ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်လာတယ် .... ရခိုင် ဒေသကို သူတို့နိုင်ငံ ဖြစ်အောင် တည်ထောင်ဖို့ ကြိုးစားတယ် .... အဲဒါတွေကို ဘာ အပေးအယူ လုပ်ရမှာလဲ ...
( ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့် )
အမျိုးသားရေးကို အပေးအယူ လုပ်လို့ရပါသလား .... အမျိုးသားရေးဆိုတာ အပေးအယူ လုပ်စရာ လိုပါသလား ... ကျွန်တော် မေးချင်တယ်.... စောင့်လေမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့ .... အခြေခံ ကျင့်ဝတ်နီတိ ကိုတောင်မှ .... မလိုက်နာနိုင်တဲ့ သူတွေ ပါးစပ်က .... အပေးအယူ ဆိုတဲ့ စကား ထွက်လာတာ .....
အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ဘူး .... ဒါက ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စပဲ .... အခုတော့ ဘွင်းဘွင်းကြီး ပေါ်လာပြီပေါ့ ....
( မြန်မာအမျိုးသားကွန်ယက် )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လေးစားပါတယ် ... ဒါပေမယ့် ဒီစကားကို ပြန်ပြီး ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ....
ပြန်ပြီး တောင်းပန်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ လိုလားပါတယ် .... ဒီလို အပေးအယူ လုပ်လိုတဲ့သူမှန်သမျှ .....
အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချ ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်....
မြန်မာနိုင်ငံသား .... ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ .... ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်ကတော့ ...
ဘင်္ဂါလီ တွေနဲ့ ဘာမှ ညှိနှိုင်းစရာ မရှိဘူး လို့ ယူဆပါတယ်.... ဘင်္ဂါလီတွေ တောင်းဆိုနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ရေး ကိစ္စဟာ .... ညှိနှိုင်းစရာ မလိုတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်....
၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ အညီ .... နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရှိတဲ့သူတွေကို စိစစ်ပြီး .... နိုင်ငံသားအဖြစ် အကျုံးဝင်တဲ့သူကို .... နိုင်ငံသား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု .... နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ သူတွေကိုတော့ ....
တရားမဝင် ဝင်ရောက်သူများ အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး .... တရားစွဲဆို အရေးယူ .... ပြီးရင် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး ရမှာကတော့ ..... ဘင်္ဂါလီတွေ သဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ .... အစိုးရအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရမယ့် .... ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ် ...
အဲဒီတော့ အစိုးရအနေနဲ့ .... ဘင်္ဂါလီတွေကို ဘာမှ ပေးစရာမရှိတဲ့အတွက် .... ပေးဖို့ ညှိနှိုင်းစရာ မလိုသလို .... ဘင်္ဂါလီတွေဆီ ကလဲ ဘာမှ မလိုချင်ပါဘူး .....
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီအနေနဲ့ .... ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်နေရာ အများစု အနိုင်ရလို့ ..... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒါမှမဟုတ် .... NLD ကိုယ်စား လှယ်တစ်ယောက် သမ္မတဖြစ် လာရင် .... ဘင်္ဂါလီတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ပေးပြီး .... ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ သစ္စာ စောင့်သိမှုကို ရယူမယ်ဆိုတဲ့ .... အပေးအယူမျိုး လုပ်ဖို့များ စဉ်းစားနေတာလား .....
ဒီလို အပေးအယူမျိုး ကို .... မြန်မာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ .... လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ကြိုတင်ပြောထားပါရစေ”
( ရခိုင် အမျိုးသား တပ်မတော် )
Posted by Gentle Men at 8:43 AM